Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Latabatra - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Latabatra
Aceris Lalàna ao Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Latabatra dia ny ekipa tena manokan-tena ny mpisolovava amin'ny Aceris Lalàna, misahana manokana ny fanelanelanana iraisam-pirenena ny lalàna mafy, izay miaraka mpanjifa anjara ao arbitrations momba Rosia, izany hoe izay rosiana ny lalàna mihatra, ny fifanekena dia ho faty any Rosia, ny fifandirana dia nitondra na manohitra ny antoko ao Rosia, na ny Fanjakana rosiana na ny Fanjakana rosiana ny fikambanana dia tafiditraAceris Lalàna ao Harvard, Oxford sy ny Sorbonne nanofana ireo mpisolovava nampidirina am-ponja ny Eoropa Andrefana, any Eoropa Atsinanana, ary Amerika Avaratra ary efa manan-danja traikefa mialoha mifandray amin'ny barotra, ny fanamboarana sy ny fampiasam-bola fifanarahana arbitrations eo ambany ny ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA, SCC, SIAC, ICDR, VIAC sy ny hafa, araka ny fitsipika, izay maro no sahiran-tsaina an'i Rosia sy Firenena mpifanolo-bodirindrina. Isika manamafy maharitra ny fidirana amin'ny birao ao Moskoa mba hihaona sy hiasa miaraka amin'ny mpanjifa, na ny an-trano birao dia any Genève, Soisa, ary foana isika azon'ny mpanjifa, na inona na inona ny toerana misy azy, amin'ny alalan'ny videoconference.
Ny Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Birao ihany koa dia manana ny fidirana amin'ny rosiana-pitsarana sy ny fotopampianarana, raha miteny rosiana sy ny teny anglisy.
Ny Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Latabatra foana ny karavato ho ny tsara indrindra ao an-toerana rosiana mpisolovava, izay mandray anjara, arakaraka ny zavatra ilaina manokana iray nomena mpanelanelana. Io no miantoka fa ny mpanjifa ny hahazo ny tsara indrindra amin'ny fanelanelanana solontena ara-dalàna koa raha ny fihazonana ny cost-effectiveness ho arbitrations momba an'i Rosia.
Efa manan-danja traikefa mialoha amin'ny arbitrations momba an'i Rosia.
Ohatra, Aceris Lalàna ao Rosia Fanelanelanana Mpisolovava Birao solontena ny rosiana mpampiasa vola amin'ny UNCITRAL fanelanelanana manohitra ny Pianakaviana firenena. Ny mpanelanelana ihany koa ireo mpisolovava nanompo toy ny torohevitra ao amin'ny fitsarana ady heloka bevava iraisam-eo amin'ny orinasa avy any Rosia sy Belzika momba ny fivarotana sy fividianana fifanarahana. Koa, ny mpikambana ao amin'ny ekipa nandray anjara tamin'ny maro arbitral fizotry ny fitrandrahana angovo sy ny sehatra mahakasika ny antoko rosiana. Aceris ny Lalàna ihany koa ny nanao toy torohevitra ho an'ny rosiana ny antoko mitady ny fanafoanana ny arbitral loka alohan'ny frantsay fitsarana sy nanome torohevitra araka ny lalàna rosiana ny mpiara-torohevitra anjara amin'ny fampiasam-bola mpanelanelana ao Azia Afovoany. Amin'ny alalan'ny manana ekipa vita fanoloran-tena mpanelanelana amin'ny mpisolovava ho arbitrations momba Rosia, Aceris Lalàna no miantoka fa arbitrations mahakasika Rosia no fomba mahomby, ny fanaovana ny tsara indrindra amin'ny fampiasana ny fanelanelanana ny mpisolovava' mahalala-fomba toy izany koa ny momba ny teny sy ny kolontsaina fahaiza-manao, izay no zava-dehibe ho an'ny vokatra mahomby ny fanelanelanana iraisam-pirenena.
Saint-Pétersbourg, Any Rosia Heloka Bevava Mpisolovava Rosiana Mpisolovava Online Fakan-Kevitra
מינהגים חכמים, געזעץ פירמס אין רוסלאַנד פֿאַר יעדער שטאָט - רוסיש אַדוואָקאַט אָנליין באַראַטונג - רוסיש געזעץ